ओमान एयरमा नै बच्चा जन्माएपछि – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०३:२१ English
ओमान एयरमा नै बच्चा जन्माएपछि
रवि भट्ट “रोषी” । घरायसीकामको सिलसिलामा २ बर्ष अगाडि ओमानको सललहमा गएकी माया (नाम परिर्वतन) ले घर फर्कने क्रममा सललहबाट मस्कटको यात्राको क्रममा ओमान एअरको उडान समयमा बच्चालाई जन्मदिएकी छिन् ।
संखुवासभा घर भएकी मायाले प्लेन उडान समय हुनु अगावै बिहान १ बजे देखि २:३५ सम्मको समयमा प्लेनको बाथरुमभित्र बच्चा जन्माएकी हुन् । उनको भनाइअनुसार पहिलो घरको मलिकको भाईले जर्बजस्ती गरेको कारण यस्तो हुनगएको र अन्तिम समयमा आएर पुलिसको सहयोगमा ११ तारिख मात्रै नेपाल फर्काउने पहल गरिएको थियो ।
सुत्केरी अवस्थामा रहेको र भिसा रद्द भएका कारण ओमानको अस्पतालले दर्ता गर्न नमाने पछि यो खबर नेपाली समुदाय माझ गएको हो । ओमानका दिपक श्रेष्ठको जानकारीमा आएपछि तत्काल पीडित महिलालाई फोन सम्पर्क गर्दा भर्खर मात्रै अस्पतालमा दर्ता गरेको भनेर फोनकर्ता श्रेष्ठलाई बताएको जानकारीमा आएको छ । पीडित महिला बिहान ३ बजे देखि अस्पताल बहिर नै रहेको बताउँदै बिहान ९:३० पछि मात्रै भर्ना लिईएको थियो । अस्पतालको र्कमचारीसँग सम्पर्क गर्दा ओमान एयरका कर्मचारी मार्फत पीडितलाई भर्ना गरिएको बुझ्नमा आएको छ ।
अहिले उनी रोयल अस्पताल बउशार, मस्कटमा छिन् । यस समस्याको लागि मायाको स्पोन्सरलाई पुलिस मार्फत खबर गर्न लगाइएको छ । मायाले छोरालाई जन्म दिएपनि घरमा विवाहित र छोरा छोरीहरु भएका कारण बच्चा लिएर घर जाने मनसायमा छैनन् । यसको निर्णयको लागि आरोपित पक्षको निर्णय आउनु बाँकी नै छ । यसरी जन्माएको कुनै पनि बच्चालाई नेपाल लान नसकिने दुतावासका कर्मचारी बताउँछन ।
अर्का सम्मानित व्यक्तित्व तथा सेवानिवृत्त मेजर डम्बर घलेले ब्रिटेनस्थित नेपाली समुदायको हितमा रातोदिन खटिरहेका अरु कैयौं “अनसङ्ग हिरोज” हरु रहेका र उनीहरुको योगदानलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी संचारमाध्यमको हो भन्नुभयो । उहाँले नेपाल ब्रिटेन डटकमले गरेको सम्मानबाट आफूहरु सबैलाई समाजसेवामा जुटिरहन थप हौसला मिलेको पनि बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल ब्रिटेन डटकमलाई सघाएका पत्रकार भगीरथ योगी तथा व्यवसायीद्वय यादव भण्डारी एवं कमल भण्डारीलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।
सम्मान कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रवक्ता डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघले गर्दै आएका कल्याणकारी कार्यक्रमहरुबारे जानकारी दिनुभएको थियो । त्यस्तै व्यवसायी किशोर सापकोटाले फोकस्टोन रोटरी क्लबको सहायतामा नेपालमा संचालन गर्न लागिएका दुईवटा पुस्तकालयहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेटवर्कले नेपालमा संचालन गर्दै आएका गतिविधिहरुबारे जानकारी गराउँदै संस्थाले हालै शुरु गरेको दश करोड रुपियाँको परोपकारी अक्षयकोषमा सक्दो सहयोग गर्न बेलायतवासी नेपाली समुदाय तथा नेपालका मित्रहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाल ब्रिटेन डटकमका प्रधान सम्पादक चिरन शर्माले सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो भने उषा भट्टले रोचक ढंगले कार्यक्रमको संचालन गर्नुभएको थियो ।